(Hadhwanaagnews) Thursday, October 11, 2018 13:12:06
Hargeysa(HWN):-Agaasimihii hore ee wasaarada qorshaynta qaranka Prof Cabdi Cali Jaamac oo hore iskaga casilay xukuumada ayaa soo bandhigay wakhti adag oo uu kala soo dabaashay madaxweyne Muuse Biixi.
xil rabo sidan umaan hadleene, waxa aan hibanayaa waa qaabka la iila dhaqmay; qasab ma ah in xil la ii dhiibo; anigoo dhisay M/weynaha, ninka fahansan baan ahay in aanay qasab ahayn in xil la ii dhiibo; taas kuma doodayo; bal dhugo sheekadan si aad u fahanto waxan tabayo: ma aha xil; ma aha cunto; waa xurmo, waa in talo la i waydiiyo Iwm, laakiin kuwa iimaanka li'i qofkii wax tawdaba waxay u haystaan xil iyo cunto; Ilaahay ha soo hadeeyo!!!
Hawshii ololaha ee Guddoomiyaha uu ku noqonayay ayaanu galnay, aniga waxa ii dheera anigoo ka soo horjeestay raggii ugu tunka waynaa xukuumadda waagaas oo aad u diidanaa musharaxa aanu wadno; waxan joogay Komishanka Aidska; waxan u qirayaa gobonimo; gaar ahaan Xirsi iyo Aamina oo war kasta oo layga geeyay aan maalina i hiifin, xil ka qaadistaydana aan ka hawlgalin; inkastoo aanay suuragasheen xilka-qaadis, maxaa yeelay, haddii aan dareen helo waxa iga go'nayd in aan is-casilo inta aanay xilka iga qaadin; hase yeeshee ma arag wax dareen ah, iyadoo waliba maalin kasta warkayga loo geyn jiray, gaar ahaan markii aan caddaystay taageeridda Guddomiyahii ku meel gaadhka ah ee waqtigaas oo ah M/weynaha immika. Ninka leh dan baad wadatay, waxan leeyahay xilkaygii iyo dantaydii ayaan dabka u saaray nin aan la hubin waagaas inuu guddoomiye noqonayo iska daa m/weyne'e; sababta aan nafta ugu hurayayna waxay ahayd anigoo ku qanacsanaa in la dulmayo!!! ama aan saxsanaado ama aan qaldanaado!!